Shaqsiga Jaceyl Adduunka Inuu Ku Noolaado Farxad Aan Dhamaad Laheyn Wuxuu Caado Iyo Dhaqan Ka Dhigtaa Arimahan Cajiibka Ah. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Shaqsiga Jaceyl Adduunka Inuu Ku Noolaado Farxad Aan Dhamaad Laheyn Wuxuu Caado Iyo Dhaqan Ka Dhigtaa Arimahan Cajiibka Ah.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 25-07-16 10:49 AM Waa Qoraal Taxane ah uu Allsiyaasad akhristayaasha kula wadaagayo qodobbo iyo dhaqamo fura u ah in qofka ku waano qaataa uu ku hanuuno ama ku barto anshaxa dhowrsoon iyo dhaqanka wanaagsan ee uu bulshada ku dhex geli karo sumcaddana kaga heli karo.
– Ha dayicin fursad aad qof kugu dheer ku gaadhsiin karto hadiyada ama ugu yaraan Salaan qaaliya.
– Ha ka warwarin hadyad lagu siiyey yarideeda, muhiimaddu maaha qiimaha shayga ee waa in uu qofkani ku xasuustay kuuna muujiyey in uu kuu gacan furan yahay.
– Hadyaddu waxa ay beertaa Kalgacalka, waxa aanay kordhisaa Jacaylka.
– Hadyad aad cid siin lahayd ha la sugin Xaflad ama Munaasabad gaar ah oo aad bixiso. Mar kasta bixi hadyadda. Miyaanay qurux badnayn in aynu hadyad haba yaraato ee u qaadno marka aynu soo booqanayno Ehel ama Asxaab.
– Waxa aad ku dadaashaa in aad bixiso hadyadda Cimriga dheer leh, halkii aad casho ama Sharaab qof uga qaadi lahayd uga iibi shay sida, Shaadh, toob, Saacad, Kabo, Qalin IWM.
– Haddii aad ilma yar hadyad siinayso, sii wax mustaqbalkiisa wax tara, sida in aad ka bixiso lacagta waxbarashada ama in aad geyso dugsi fiican oo aad u doortay.
– Haddii hadyad laguu keeno ha u eegin in aad u baahantahay iyo in kale ee waxa aad u eegtada qiimaha kalgacalka uu qofku kugu xasuustay.
– Ceeb maaha in hadyad lagu siiyay aad u sii hibayso qof kale, laakiin ku dadaal in xitaa haddii aanad u baahnayn aad haysato hadyadda lagu siiyay qofka aad hadyadda siin lahaydna mid kale u raadi.
– Si kasta oo uu u xumaado xidhiidhka aad la leedahay qof mar hore aad hadyad siiysay dib ha ugagga noqon.
– Qof hadyad hore ku siiyay ha u celin haddiiba uu xumaado xidhiidhkiinu haddii ay ka fursan waydo in aanad haysan sii qof kale oo u baahan.
– Cadarka wanaagsan hadyad ka wanaagsani ma jirto ee la ogow cidda aad wax u hadyadaynayso.
– Haddii hadyad laguugu keeno Weel, Shandad ama shay aad celinayso ha Celin isaga oo madhan, haddii aad buuxin kari waydo, wax uun ku rid, laakiin ha ka duwanaado hadyaddii marka hore laguu soo hadyadeeyey.
– Xaq ayaad u leedahay in aad qof wax ku khilaafi karto, laakiin adiga oo aan cadhoon qofkana hiifin sheeg dooddaada. U hadal sida ugu habboon ee ixtiraamku ka muuqdo, halkii aad ka odhan lahayd. “Waad khladan tahay..” Maad tidhaahdid, “Ma xuma aragtidaadu, laakiin aniga si sidaa in yar ka duwan ayaa ay ila muuqataa…” Uma jeedo ka tanaasul wax aad hubto saxnaanshiyaheeda, waxa aan rabaa adiga oo aan cid weerarin in aad muujiso muuji in aragtidaadu saxan tahay.
– Ha filan in dadku ay mar walba ku waafaqaan. Xitaa haddii aad hubto in aad saxantahay cid ayuun ku khilaafaysa. – — Noqo qof dabacsan oo furfuran, dadka dhegayso, haddii aanad ku waafaqsanayn waxa uu ka hadlayo qofka kula hadlayaa, ugu jawaab si deggen adiga oo taaganna u jawaab, oo hadalka badhkii ha odhan marka aad dhaqaaqdo.